विश्वलाई सशंकित बनाइरहेको चीनमा देखिएको नयाँ भाइरस के हो ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ माघ २०७६, शनिबार ०७:५८ |
काठमाडौं । चीनमा हालै देखिएको रहस्मय भाइरसबाट प्रभावित हुने मानिसको संख्या सयौं पुगेको चिनियाँ अधिकारीले जनाएका छन्।
चीनका विभिन्न स्थानमा नयाँ भाइरसको संक्रमण देखिएपछि ४५ वटा प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणपछि करिब १ हजार ७ सय व्यक्तिमा उक्त भाइरसको संक्रमण देखिएको विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन्।
चीनको विभिन्न सहरमा भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। चीनको उहान सिटीमा मात्र हालै उक्त भाइरस संक्रमणको कारण दुईजनाको मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
‘म गत साताभन्दा अहिले अझै चिन्तित भएको छु,’ वैज्ञानिक निल फर्गुसनले भने। लन्डनको इम्पेरियल कलेजस्थित एमआरसी डिजिज फर ग्लोबल इन्फेक्सियस डिजिजले सञ्चालन गरेको थियो। यो संस्थाले बेलायती सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिँदै आएको छ
सिंगापुर र हङकङले चीनको उहान सिटीबाट आउने यात्रुलाई विशेष राख्दै आएको छ। नयाँ ‘चाइनिज भाइरस’ को संक्रमण बढ्दै गएपछि अमेरिकाले पनि सानफ्रान्सिस्को, लस एन्जललस र न्युयोर्कको विमानस्थलमा चीनबाट आउने यात्रुलाई कडा निगरानी राख्न थालेको छ।
यो भाइरसबाट संक्रमित बिरामी अन्य मुलुकमा समेत देखिन थालेपछि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन्। जुन बेला चीनको उहान सिटीमा यो भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएको थियो, हो, त्यही समयमा थाइल्यान्डमा दुई बिरामी र जापानमा एक बिरामी देखिएका थिए।
‘यसले मलाई अझै चिन्तित बनायो,’ प्राध्यापक फर्गुसनले भने। ‘शायद उहान सिटीबाटै भाइरसका संक्रमण भएका तीन बिरामी अन्य देशमा पनि भेटियो, कतै अझै अरु पनि ‘केस’ देखिने त होइनन् भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ,’ उनले थपे।
कतिजनामा अहिलेसम्म संक्रमण देखियो भन्ने यकिन संख्या भन्न नसकिए पनि महामारी फैलँदै गएको भने सत्य रहेको विज्ञको भनाइ छ। चीनको उहान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक ३ हजार ४ सय यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्ने स्थानीय अधिकारीले जनाएका छन्।
के हो नयाँ ‘चाइनिज भाइरस’ ?
बिरामीबाट भाइरसको स्याम्पल लिएर प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको छ। चिनियाँ अधिकृत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो संक्रमण कोरोनाभाइरसले भएको बताउँदै आएका छन्। कोरोनाभाइरस भाइरसको वृहद् प्रजाति रहेको वैज्ञानिकले जनाएका छन्।
जाडोमा हुने यो भाइरसको संक्रमणले श्वासप्रश्वासमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। यसअघि चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणले बिरामी भएका ८ हजार ९८ जना बिरामीमध्ये ७ सय ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो।
नयाँ भाइरसको वंशानुगत अवस्था विश्लेषण गर्दा यो सार्ससँग निकट रहनसक्ने विश्लेषकले स्पष्ट पारेका छन्। यो भाइरसका कारण केही बिरामीमा निमोनिया संक्रमण देखिएको चिनिया अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
Previousसत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दलहरुबीच सहमति
Nextभारतमा आर्थिक मन्दी, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्रै